Inqubomgomo Yokukhipha Okukhishwayo
Le ndatshana ichazisisa iqoqo lezidingo i-app okufanele ihlangabezane nazo ukuze isatshalaliswe nge-Firefox Marketplace. Lezi zidingo zakhelwe ukubhalansisa izidingo zomsunguli kanye nezabasebenzisa ama-app aku-Firefox Marketplace. Abasunguli bafuna izidingo ezinobulungiswa, ezenza ngokufanayo njalo, nezingaphoqeleli abangazethemba ukuba bakhe ibhizinisi kuzo. Ngakolunye uhlangothi, abasebenzisi bafuna ukuqinisekiswa ukuthi ama-app aphephile, azosebenza kumadivayisi abo, nokuthi i-app izokwenza lokho okuthiwe izokwenza. Izidingo ze-app ngezansi zihlose ukubhalansisa phakathi kwalezi zidingo.
Nakhu okulindelwe abakwa-Mozilla mayelana nokuthi yini ukubukezwa kwe-app nokuthi yini okungesiko:
Uhlelo olunqunyiwe luzosetshenziswa ngendlela elungile, enozwelo, kanye neyenza ngokufanayo njalo. Uhlelo lokubukezwa kwe-app akuhlosiwe ukuba lube yisivimbo, kodwa ukuba lube yinsiza ethembekile ehlinzeka ngembuyisambiko ukulekelela abagqugquzeli babe nempumelelo enkulu.
Ababuyekezi kabasilo ithimba leMibuzo Nezimpendulo! Ngesikhathi sohlelo lokubukeza, kukhona umuntu ozobuka ukusebenza kwe-app achithe imizuzwana embalwa eyisebenzisa ngendlela umsebenzisi angenza ngayo.
Uma i-app ingaphumeleli lapho ibukezwa, umgqugquzeli uzonikezwa incazelo ecacile ngezinkinga ezitholakele, izinyathelo okufanele ziphindwe, uma kungenzeka, umbukezi angakhombisa umgqugquzeli indlela eyiyo ngokumhlinzeka ngamalinki ahambelanayo noma enze izincomo zezinguquko ezidinga ukwenziwa.
Ababukezi kabenzi zinqumo ekutheni i-app ibukeka kanjani, kuphela ekutheni i-app isebenza kanjani. Isibonelo, i-app enendima egqanyiswe ngokubomvu phezu kombala osawolintshi ngeke yenqatshwe ngoba iyimbi, kodwa ingenqatshwa uma ingafundeki.
Sonke isikhathi siye sibakholwe abagqugquzeli. Uma ungenasiqiniseko sokuthi i-app kumele yenqatshwe, ababukezi bazobuza imibuzo ngaphambi kokushicilela ukwenqatshwa kwayo. Ama-app ngeke enqatshwe (ngokwaziwa) ngenxa yezindaba zezinkundla ezingekho ezandleni zomgqugquzeli ukuzilawula; noma kunjalo singagodla imvume uma singakwazi ukuqalisa ukusebenza kwe-app.
Imininingwane egcwele yesakhiwo se-app yokuphepha iyatholakala lapha: https://wiki.mozilla.org/Apps/Security
I-app manifest kufanele isuke endaweni efanayo neye-app.
I-app manifest kufanele inikezwe i-Content-Type header ye-application/x-web-app-manifest+json.
Ama-app akufanele asebenzise izibuyiselamuva noma ama-iframes ukuloda imininingwane umgqugquzeli angavumelekile ukuyisebenzisa.
Izimvume eziceliwe kufanele zicaciswe ku-app manifest ngencazelo yokuthi kungani kudingeka imvume.
Ama-app ohlobo olukhethekile azophinda ahlolisiswe, kubandakanya ukubukezwa kwekhodi, ngenxa yokwanda kwamathuba okwenziwa kwezenzo ezimbi kanye nokulahlekelwa komsebenzisi yidatha ngamaAPIs aphambili.
Inqubomgomo Yokuphepha Kokuqukethwe (CSP) echazwe ku-app's manifest ichaza ukuthi yini engenziwa yikhodi ye-app. Uhlelo olumisiwe, uma luchaziwe, kuma-app angabalulekile luyafana kunoma yiyiphi iwebhusayithi; ama-app ohlobo olubalulekile anezinhlelo ezimisiwe ezinemikhawulo. Umbiko wokuqinisekisa owenziwe kokulethwe ku-Firefox Marketplace uzoveza kahle okungase kube ngukweqiwa kwe-CSP ku-app yakho - noma kunjalo-ke qaphela okungase kube yimibiko-mbumbulu kanye nokusetshenziswa kwezingxenye zamalayibrari engxenye yesithathu ongawasebenzisi.
Umgqugquzeli kufanele akwazi ukulinka inqubomgomo yokugcinwa kwemininingwane iyimfihlo ngesikhathi kulethwa okulethwayo, kodwa azikho izidingo zefomethi nokuqukethwe kule nqubomgomo yokugcinwa kwemininingwane ivikelekile. Khululeka usebenzise i-template yenqubomgomo yethu yokuvikeleka kwemininingwane. Uphinde ubukabuke imihlahlandlela yenqubomgomo yethu yokuvikelwa kwemininingwane.
Noma yimaphi ama-app ephula Imihlahlandlela yethu Yokuqukethwe lapha ngezansi awavumelekile. Uma ucabanga ukuthi yisimo esibi kakhulu, uyacelwa ucele ithimba lababukezi ukuba likucacisele, ngisho noma i-app ingakalungeli ukuba ilethwe ngaleso sikhathi. Sifuna ukukusiza uhlale emgudwini olungile, kunokuba kuchithwe isikhathi sokuthuthukiswa kokuqukethwe okuzogcina ngokunqatshwa.
Kusukela ngoJanuwari 2014, wonke ama-app kufanele athole ukulinganiselwa okuvela ku-International Age Rating Coalition (IARC). Ukuze uthole lokhu kulinganiselwa, sizokuyalela kuphephambuzo elifishane ngesikhathi senqubo yokulethwa kokulethwayo, uzobe usuthola ukulinganiselwa ngokushesha. Imininingwane ethe xaxa imayelana nenqubo yokulinganisela etholakala lapha.
Imifanekiso yeskrini nezincazelo ezilethiwe ku-Firefox Marketplace kufanele zisho lokho okushiwo yi-app ncimishi. Ungabandakanya isithombe “sokukhangisa” esi-1 kuya kwezi-2 ezikhombisa ukuhambisana, qhathanisa ama-feature, noma kungenjalo wandise intshisekelo, kodwa kufanele kube khona okungenani umfanekiso weskrini se-app owodwa, ukuze abasebenzisi bakwazi ukubuka ngaphambilini lokho abazokuthola. Uma esinye semifanekiso yeskrini siyi-splash noma i-launch kufanele uphinde wengeze umfanekiso weskrini wengxenye yesisetshenziswa sakho esisebenzayo.
Ku-app manifest, ama-locale keys kufanele ameshelane nokumisiwe kwaleyo ndawo i-app yakho ekwesekayo. Ngokuhlinzeka i-locale key ngolimi lwesi-Polish, abasebenzisi be-app yakho bazolindela ukuba itholakale ngalolo limi.
I-app icon kufanele ilandele i-Firefox OS app icons style guide. Yi-icon eyi-128 x 128 kuphela efunekayo, kodwa siyayincoma ne-icon eyi-512 x 512 nayo (ngemininingwane ethe xaxa, buka lapha Icon implementation for apps.) Qaphela ukuthi ama-icon angaba yindilinga, isikwele esinendilinga, noma isikwele, njengokusho komhlahlandlela wesitayela.
Lolu luhlu luchaza izinhlobo zokuqukethwe ezingafanelekile ku-Firefox Marketplace. Lolu luhlu lunikeza izibonelo, hhayi izincazelo, futhi lungachitshiyelwa. Uma isisetshenziswa kutholakala sephule okunye kwale mihlahlandlela yokuqukethwe, iMozilla inelungelo lokusisusa ngokushesha ku Firefox Marketplace.
Azivumelekile izinto ezihlobene nobunqunu, noma izithombe ezikhombisa ezocansi noma udlame.
Kungaqukathi lutho oluhlukumeza amalungelo omunye umuntu, kubandakanya ubuciko nemisebenzi yabantu noma amalungelo okuvikeleka noma ukubukiswa.
Kungaqukathi lutho olwenzelwe ukulimaza iMozilla noma abasebenzisi (njengekhodi yenzondo, ama-virus, izinsiza zobunhloli noma i-malware).
Kungaqukathi lutho olungekho emthethweni noma olugqugquzela izenzo ezingekho emthethweni.
Kungaqukathi lutho olukhohlisayo, oluholela ophathe, olungumkhonyovu noma olwenzelwe ukweba imininingwane noma ukwenza izenzo zokuntshontsha imininingwane yabantu.
Kungaqukathi lutho olugqugquzela ukugembula.
Kungaqukathi lutho oluhambisana nokukhangiswa kwemikhiqizo engekho emthethweni noma izinsiza.
Kungaqukathi lutho oluxhaphaza izingane.
Kungaqukathi lutho oludicilela phansi, olusabisayo, olugqugquzela udlame, noma olukhuthaza izenzo zokucabangela omunye umuntu noma iqembu ngenxa yeminyaka yabo yobudala, ubulili, ubuzwe, ubuhlanga, izwe lendabuko, izinkolelo, ubulili, ukukhubazeka, inkolo, indawo yokudabuka noma okunye okungabukwa njengokuhlasela ngamazwi.
Kungaqukathi lutho oluholela umsebenzisi ophathe ukuba athathe isinqumo sokuthenga.
Umgqugquzeli kufanele akwazi ukusebenzisa ama-feature e-app akhangisiwe aqavile. Amaphutha okwakheka kanye nezinkinga ezingatheni kuzobikwa kumgqugquzeli, kodwa ngeke kuvimbe i-app ukuba igunyazelwe ukusebenza.
I-app akufanele ithunaze ukusebenza kohlelo noma ukuzinza.
Umgqugquzeli kufanele athathe izinyathelo ezifanele ukulungisa ukuhleleka kwe-app kuqondene nebhekiswe kubo. Inhloso yalesi sidingo ukubamba ukwehluleka okusobala, njengalokhu:
I-app elethelwe i-mobile kodwa kucacile ukuthi ngeyesayithi ye-desktop.
I-app okucacile ukuthi ayinwebeki igcwalise isikhala esikhona seskrini (cabanga nge-320x480 app ethatha kuphela ikhona eliphezulu lethabhulethi, bese enye ingxenye yeskrini ingabi nalutho. Lokhu yikho okuhlosiwe!)
I-app kufanele isebenzise eyayo indlela yokucinga inganciki ku-browser chrome noma i-hardware back button, engeke ize ibe khona kuwo wonke amadivayisi.
Isibonelo, i-app inganqatshwa uma umbuyekezi echushachusha kuyo ngaphakathi bese engasakwazi ukubuyela emuva. Ama-app AKUDINGEKI ukuba asebenzise inkinobho engemuva ekhona kuwo wonke ama-app endalo.
Ku-Firefox OS v1.1 nangaphezulu, ungengeza i-chrome manifest property ukuze wengeze ngezilawuli ezincane zokuchushachusha.
Izinsiza zokuchushachusha, njengezinkinobho, amalinki, kufanele kube lula ukuwachofoza noma ukuwathinta.
Sethemba ukuthi ngeke sibe khona isidingo sokuyisebenzisa, kodwa siyaligodla ilungelo lokukhipha ("blocklist") noma iyiphi i-app eshicilelwe okutholakala ukuthi yephula inqubomgomo yokuphepha, nokuvikelwa kwemininingwane, noma izidingo zokuqukethwe, noma ama-app adicilela phansi uhlelo noma acekela phansi inethiwekhi. Abagqugquzeli bazokwaziswa ngesimo ngaphambi kokuba i-app ikhishwe, phambi kwalokho bazobe bethathwa njengezakhamuzi ezilungile ngaphandle uma kunobufakazi obuphambene nalokho, futhi bazothola ukwesekwa yithimba lababukezi bama-app ukuxhumana ngokuthi kuqhubekani bese kulungiswa inkinga. Izibonelo ezicacile zezimo lapho kudingeka kukhishwe i-app ethile zibandakanya:
Ukushintshwa kokuqukethwe kusuka ku-Puppy Pictures v1.0 kuya ku-Brutal Violence v1.0 (ngaphandle kokuvuselela isilinganiso sokuqukethwe)
Ukungaziphathi kahle ngokwedlulele kumaphesenti abasebenzisi abaningi — ukuziphatha ocingweni okudicilela isithunzi phansi, okudala ukucima nya kwamadivayisi (rebooting), okudala ukulahleka kwemininingwane, njll. Lapho abasebenzisi bengakwazi ukubona ukuthi kungenxa ye-app nalapho kungaxazululeki ngisho noma icishwe nya idivayisi.
I-app esetshenziselwa ukuhlasela kunethiwekhi, njengokusatshalaliswa kokuvimbela isevisi (DDOS).
Imithombo elandelayo ihlinzeka ngemininingwane ethe xaxa ngenqubo yokubukezwa kanye nababukezi bama-app:
Reveiwers test criteria — leli khasi lichaza izivivinyo ezizokwenziwa ngababukezi bama-app ku-app yakho
App reviewers —lithintwa kanjani ithimba lababukezi kanye nokuba yingxenye yokubukezwa kwama-app
Last updated by: DevonB, Nov 24, 2014 5:37:57 AM
Other languages: isiZulu (zu) English (US) (en-US) Afrikaans (af) عربي (ar) বাংলা (বাংলাদেশ) (bn-BD) বাংলা (ভারত) (bn-IN) Deutsch (de) Eʋe (ee) Ελληνικά (el) Español (es) Français (fr) Hausa (ha) हिन्दी (भारत) (hi-IN) Igbo (ig) Italiano (it) 日本語 (ja) 한국어 (ko) Lingála (ln) Malagasy (mg) မြန်မာဘာသာ (my) Português (do Brasil) (pt-BR) Русский (ru) Kiswahili (sw) தமிழ் (ta) Wolof (wo) isiXhosa (xh) Yorùbá (yo) 正體中文 (繁體) (zh-TW)